Doono dagaal weyn ee u dhexeeya Maraykanka iyo Iran? | Apg29
The weerar gantaal US oo keeni karta in dagaal weyn ee Bariga Dhexe, ayaa sheegay in Rouzbeh Parsi, khabiir Bariga Dhexe ee UI ah.
Halista weerarrada argaggixiso ee dunida sii kordhaya. Qiimaha Oil ay kor u kacayso, oo aan maanta ogaaday markii aan gaariga kor u buuxsantay.
Lagu dilay drönarattack
Habeenkii dilay US Qassem Soleimani, oo madax ka ah ciidamada Quds hormoodka IRGC ee, drönarattack ka baxsan Garoonka Caalamiga ah ee Baqdaad.
Xataa madax ka tirsan dalka Ciraaq Abu Mahdi al-Muhandis ayaa ku dhintay lix qof oo kale ayaa dhintey dhowr kalena ay ku dhaawacmeen.
On amarrada Trump
drönarattacken The American la sameeyay on amarka Madaxweynaha Donald Trump.
US Department of dhibcood Difaaca baxay Soleimani isagoo ogolaaday weerar gantaal toddobaadkii la soo dhaafay ka dhacay saldhig ciidan Ciraaq dhow Kirkuk ee Ciraaq, halkaas oo muwaadin Maraykan ah ayaa ku dhintay afar askari Mareykanka ay ku dhaawacmeen.
weerarka ka dib markii Mareykanka uu ku jawaabay weerarada cirka badan oo ka gees Iran KMG maleeshiyada shiico Hezbollah Brigades ee Ciraaq. 25 qof ayaa lagu dilay, taas oo keentay in dibad baxyo rabshado wata oo ka baxsan Safaaradda Maraykanka ee dalka Ciraaq.
Safaarada ayaa waxaa xoog ku soo galeen
Safaaradda Eve On sanadka cusub ayaa waxaa xoog ku soo galeen by dibad. Sida laga soo xigtay US tahay in Qassem Soleiman dambeeya iiriyo safaaradda Tuesday ahaayeen.
US haatan ku baaqday in muwaadiniinta Maraykanka ku jira Ciraaq ay si degdeg ah ka tago dalka.
waxa ay noqon doontaa dagaal weyn hadda u dhexeeya Maraykanka iyo Iran? Waa in aan ka dib qoraalka warbaahinta iyo reactions tago, sidaas darteed waxaan u muuqdaan in ay ogeysiis in warbaahinta u muuqdaan in ay jeclaan. Si kastaba ha ahaatee, qarxinta ah "filayo" dagaalka ah sida.
Waxaa intaa dheer, waxaan u malaynayaa in ay noqon doonto xun in Iran ee "geesi dagaal" Qassem Soleimani ahayd iyadoo la raacayo labada argagixisada ee Maraykanka iyo Midowga Yurub. Laakiin taasi macnaheedu ma aha waa okay by Maraykanka in dadka ay dilaan.
Oo uu Ilaah jeclaaday
Sidoo kale Qassem Soleimani ahaa oo uu Ilaah jeclaaday iyo sidoo kale Kuwa this akhrineyso. Waxaan u baahan nahay Ilaah ka badan sidii hore.
Oo sidee baad ku helo Ilaah? By aqbalin in Wiilkiisa Ciise Masiix ah. Markaasaa waxaa u badbaadi doontaa oo is dembiyadiinna oo dhanna waa cafiyan yihiin.